Ngokuhamba ukuguqula uhlelo lwezemfundo, okwamanje a lot of ukunakwa ikhokhelwa ukuqaliswa indlela umsebenzi. Iphuzu eliyinhloko ukuthi ingane, umhlanganyeli agcwele asebenzayo inqubo yemfundo.
Njengoba ufunda preschooler nezwe ngaphandle, ukuze imisebenzi yocwaningo phambili, umsebenzi. Ilukuluku futhi bafisa ukwazi ifakwa iyahola ukuqaliswa pre-school izinhlelo zemfundo. Esimeni semakhaya ukugeleza omkhulu kolwazi, nokutholakala kwezinsiza ahlukahlukene futhi sekulula nokuya kwamanye yokuthola isixazululo senkinga, ingane kumele azimisele ukufunda izinto ezintsha.
Yezengqondo ucwaningo umsebenzi lezingane zasenkulisa - isimo engokwemvelo izingane. Zicabange ingane - mhlawumbe othile bacubungula amahora sabazali bezama ukuqonda indlela. Little umcwaningi nge ukufakwa kokumqoka kuphela esandleni sakhe - engokwemvelo kanye evamile izingane njengoba abasesikoleni kanye enkulisa.
imisebenzi yocwaningo kudala izimo kwengqondo ke inguquko bushelelezi ngayo ukuthuthukiswa kwawena. Kuvele umfundisi ongumakad 'ebona uyazi futhi uyaqonda ukuthi akufanele ukugxambukela le nqubo, nje ulithumele ithrekhi.
zokusebenza kwengqondo eziningi ezifuywayo bavame ukuba bakholwe ukuthi imisebenzi yocwaningo - oluphakeme kakhulu yomsebenzi engqondweni yethu lapho ingane akuyona kunezinxushunxushu uzama ukuqonda ukuthi, njengoba wahlela, futhi ngenjongo uzama ukuhlela umphumela uya inhloso ehlosiwe ngakho.
isakhiwo Umsebenzi wosesho simiswe ngalendlela lelandzelako:
- wadluliselwa omdala noma ezinganeni ngokwazo ukubeka phambili inkinga ingaxazululwa;
- Izimo ukuhlaziywa kunikela ikhambi yenkinga (operation kungenzeka kwenziwe izingane, kokubili ngokuzimela futhi ngosizo omdala);
- imibono eyayisinesikhathi ngemvelaphi inkinga nezindlela ukuzixazulula;
- kukhethwa izindlela ukuhlola futhi ngokushesha engibuza izindlela yokuxazulula le nkinga;
- iziphetho, imiphumela ukuhlaziywa;
- nezinselele ezintsha futhi ingxoxo.
imisebenzi Ucwaningo olwenziwe yi-algorithm ezilandelayo:
- ekwakhiweni inkinga;
- definition mayelana nale ndaba, ukubeka imigomo kanye nezinhloso;
- kusungulwa kweluhlelo isinyathelo;
- ukuhlinzekwa nakho ngqo ukuqinisekisa noma ukuphikisa lo mbono;
- ukuhlaziywa imisebenzi lwenteke, tiphetfo, ukuqhubeka izixazululo inkinga.
umsebenzi Ucwaningo labafundi izingane zasenkulisa, Nokho, njengoba bonke abantu emsebenzini ohlongozwayo algorithm ngenhla echazwe.
Njengoba izithakazelo kanye nezihloko ucwaningo, lo esikoleni amadala uncamela ucwaningo lapho ubudlelwano imbangela nemphumela. Ngokwesibonelo, ngesimo imidlalo (futhi ehola umsebenzi kulonyaka game), eba ukucabanga. Umsebenzi oyinhloko abadala - ukuzama kuthakazelise ingane nokuhlangenwe nakho okungajwayelekile noma umphumela, uvumele ukuhlolwa esikoleni.
Ifomu Perfect nokungapheleli isenzo
Uyini zokukhwabanisa? ithonya nolukhohlisayo